सर्वोच्चको सान- विचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १३, २०७६ सम्पादकीय
नेपालले आरोहणका लागि ४ सय १४ हिमाल खुला गरेको छ । यीमध्ये ३१ हिमालमा हरेक वर्ष ४ सिजन आरोहण हुन्छ । यो सिजनमा १ सय १६ आरोहण दलका ८ सय ९५ जनाले अनुमति लिएका थिए । अनुमति लिएकामध्ये ३ सय ८१ जना सगरमाथा गएका थिए । आरोहीहरूको भीड देखिने एउटा तस्बिरले बिहीबार संसारको ध्यान त्यतै तानियो । सर्वोच्च चुम्न चाहनेहरूको उत्साहजनक सहभागिता त देखियो तर आरोहण बिलकुलै व्यवस्थित देखिएन ।
९८ वर्षअघि हर्बट मेलोरीले सगरमाथा आरोहणको पहिलो प्रयास गरेका थिए, सकेनन् । त्यसयता कम्तीमा २० हजार आरोहीले सगरमाथामा पाइला राख्न खोजेकामा ७ हजार हाराहारी मात्रै सफल भए । आरोहण क्रममा कम्तीमा ३ सयले ज्यान गुमाइसके ।
सगरमाथा आरोहणको मुख्य चुनौती नै खराब मौसम हो ।
सन् २०१२ मा जस्तै यसपटक पनि आरोहीलाई मौसमले साथ दिएन जसले गर्दा समयमै भर्‍याङ र डोरीको सहायताले बाटो बनाउने काम पछाडि धकेलियो । यसको असर बुधबारको आरोहणमा देखा पर्‍यो । अघिल्लो दिन अत्यधिक हावाहुरी चलेका कारण चुचुरोमा जान नसकेका र बुधबार चौथो शिविरबाट हिँडेकाहरू साउथकोलमा एकैपल्ट भीड लागे । त्यो तस्बिरले प्रस्टै भन्छ– यसपटक पनि आरोहण संयोजन र व्यवस्थापनमै कमजोरी देखियो । सरकारी अधिकारी, पर्वतारोहण एजेन्सी र टोली नेताहरूबीचको तालमेल नमिल्दा सगरमाथामा ट्राफिक जाम भयो ।
हरेक वर्ष जेठको पहिलो वा दोस्रो साता मात्रै आरोहणका लागि अनुकूल हुन्छ । नेपाली पर्यटन व्यवसायी यसबारे जानकार नै छन् । पर्यटन विभाग यसको मुख्य भूमिकामा रहन्छ । विभागका कमजोरी यसपल्ट पनि पुनरावृत्त भए । उसले खटाएका सयभन्दा बढी सम्पर्क अधिकृत आधारशिविरमा जति दिन बस्नुपर्ने हो, त्यति बसेनन् । सायद कति त त्यहाँसम्मै पुगेनन् !
यस्तो समस्या यो सिजनको मात्र होइन, बर्सेनिको हो । अधिकांश सम्पर्क अधिकृत करिब दुई महिनाका लागि खटिएका हुन्छन् । आरोहण सफल भए/नभएको प्रमाणित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि सम्पर्क अधिकृतको दायित्व यत्तिमै सीमित छैन । हिमालमा हुन सक्ने अवैध गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने दायित्व पनि यिनीहरूकै हो । प्रत्येक आरोहण दलबाट २ देखि ४ लाख रुपैयाँ भत्ता पाउने यी सम्पर्क अधिकृतले फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नेलगायत कामसमेत गर्नुपर्ने हो । तर खासमा उनीहरू काठमाडौंमै गुप्तवास बस्छन् । आधारशिविरसम्म पुगिहाले पनि बिरामी भएको बहानामा फर्किन्छन् ।
सम्पर्क अधिकृतबारे गुनासो उठ्न थालेको आज होइन, वर्षौं भयो । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर विषय ठानेकै छैन । यसै सिजनमा २४ औं पल्ट सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमानी बनाएका कामीरिता शेर्पा काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै रुष्ट भए । त्यहाँको फोहोर र कमजोर व्यवस्थापन देखेर उनी रिसाएका थिए ।
सम्पर्क अधिकृत जिम्मेवार नभएकै कारण गत वर्ष सगरमाथा आरोहणै नगरेका एक भारतीय जोडीले आरोहणको प्रमाणपत्र बुझेका थिए । जबसम्म सम्पर्क अधिकृतले हिमाल आरोहणलाई पैसा कमाउने काज भ्रमणका रूपमा मात्र बुझिरहन्छन् तबसम्म आरोहण व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।
हिमाल आरोहणका लागि अति महत्त्वपूर्ण पक्ष मौसम पूर्वानुमान प्रविधि हो । तर हाम्रा हिमालमा हुन सक्ने आँधीहुरी र हिमपातलगायतबारे पूर्वजानकारी दिने कुनै संयन्त्र नै छैन । ६६ वर्षअघि पहिला आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले २९ मेका दिन सगरमाथा आरोहण गरेको सम्झनामा उक्त दिनलाई सगरमाथा दिवस मनाइने गरिएको भए पनि त्यो औपचारिकतामै मात्र सीमित छ । यस अवधिमा संसारले प्रविधिको क्षेत्रमा कत्रो फड्को मारिसक्यो । हामी भने जहीँको त्यहीँ छौं ।
चीनले जस्तो हिमाल आरोहण अनुमतिमा नेपालले कडाइ गर्न सक्दैन । किनकि यो नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनदेखि राज्यका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार पनि हो । नेपाली आरोहीले सरदर १० लाख खर्च गर्छन् भने विदेशीले ४० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्चन्छन् । यो सिजनमा मात्रै आरोहीले करिब ५० करोडको रोयल्टी बुझाएका छन् ।
यसबाहेक हिमाल नेपाललाई विश्वमा चिनाउने माध्यम पनि हुन् । तर, यसरी नै आरोहण अव्यवस्थित हुने र दुर्घटना बढ्दै जाने हो भने हामीले आफूलाई चिनाउनेभन्दा पनि दुष्प्रचार हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । सर्वोच्चको सान राख्ने हामी आफैंले हो । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन आरोहणमा सक्दो वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधि अपनाउनुपर्छ । भरपर्दो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली हुनुपर्छ । हिमालमा प्रदूषण नहोस् भन्नेमा चनाखो रहनुपर्छ । सकेसम्म कुनै पनि आरोहीको मृत्यु नहोस् भन्नेमा राज्य पूरै सचेत हुनुपर्छ । प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१४
तर मेरा पिताजीको विस्थापन वा काकाको अपहरणबारे लेख्नु यो लेखको उद्देश्य होइन । अझै पनि काठमाडौंमा चर्चा सुनिन्छ, मधेस आन्दोलन र मधेसी सशस्त्र समूहका कारण मधेसबाट पहाडीहरूको विस्थापन भएको थियो भनेर । यो पूर्ण सत्य होइन । त्यस द्वन्द्वबाट मधेसीहरू नै धेरै गुणा बढी प्रभावित भएका थिए । खास गरी देहातका मानिसहरू । यसबारे खासै चर्चा भएको छैन । यस्तो किन हुन्छ ? सामान्यतया राजनीति र अपराधको कक्टेल बनेपछि यस्तो हुने हो । मधेसमा पनि त्यही भएको थियो ।